China mgbịrịgba Krismas na ihe ịchọ mma ịchọ mma na ndị nrụpụta | Kingtai
Ike enameln pin
Ndị mmebe ekeresimesi na-ekepụta ihe ngosi ọkụ pụrụ iche maka akụ ọ bụla anyị chọrọ mma, chọpụta otu anyị nwere ike isi mee ka ekeresimesi gị wee nwee ọke na ụdị na klaasị.
Kasị Mma eji
N'iburu n'uche ụdị mmadụ na gburugburu nke ọnọdụ ọ bụla.
nke na-egosi mmụọ ịhụnanya nke ịgụ ihe.
You nwere ike weta anwansi nke ekeresimesi n'ime ụlọ gị kwa, yana kpochapụwo Christmas osisi decorations ịbụ nanị mmalite nke anyị ime decorations. Enwere ike iji mgbịrịgba anyị na okpu anyị chọọ mma ụzọ na banisters, yana gịnị ma ị ga-agbakwunye ụfọdụ ọkụ gburugburu sọks nke afọ a na okpu ọkụ na usoro mmemme dị.
Echegbula onwe gị banyere nsogbu nke itinye na ịtọsa ihe ịchọ mma. N'agbanyeghị ma ị gbazitere ma ọ bụ zụta n'aka anyị, ọ bụ ihe obi ụtọ anyị ịrụ ọrụ niile maka gị ka ị nwee ike ịnọdụ ala ma nwee anwansi nke ekeresimesi na-etinye ọnụ n'anya gị.
Etu esi eme ya
Ndị a Christmas ngwaahịa nwere ike ịbụ ejiri ya na zinc alloy, ọla, Igwe anaghị agba nchara, pewter, aluminom, rọba ma mepụtara site na usoro a wụrụ awụ. Ngwongwo ndị ahụ na-ekpo ọkụ mmiri, wụsara n'ime ebu, ma kee ya site na ntụgharị.
Production oge: 10-15 ụbọchị azụmaahịa mgbe akwadochara nka.
Nke gara aga: Ibe edokwubara na onye ochichi